မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: သူတို့ပြောတဲ့ အချစ်နဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အချစ်
သူတို့ပြောတဲ့ အချစ်(၁) လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပျော်ရွှင်ရမယ်။ ကိုယ့်အတွက် ပျော်ရွှင်သလို သူ့အတွက်လဲ ပျော်ရမယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့လူဟာ အလှပဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆွဲဆောင်မူ အရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ အသက်ရှင်တာ မေ့လျော့ခြင်းကို လက်ကိုင်ထားလို့။ မိန်းကလေးတွေ အသက်ရှင်တာ မှတ်သားခြင်းကို လက်ကိုင်ထားလို့။ ......................Socrates(၂) လင်မယားဆိုတာ ကပ်ကြေးတစ်လက်နဲ့တူတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ အသွားနှစ်ခုဟာ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူး။ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေပါစေ ကြားဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ အသွားနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီး ညှပ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ ..S.Smith(၃) လူငယ်တွေရဲ့ အိပ်မက်ဟာ အချစ်၊ ငွေကြေးနဲ့ ကျန်းမာရေးတဲ့။ ဒါပေမဲ့တချိန်ချိန်မှာတော့ ကျန်းမာရေး၊ ငွေကြေးနဲ့ အချစ်လို့ ပြောင်းလဲသွားတာကိုသူတို့ သတိပြုမိကြလိမ့်မယ်။....(၄) မိန်းကလေးတွေဟာ စကားပြောတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကို လျစ်လျူရှူထားတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ပြောရင် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောတယ်။ သူတို့ကို ပျော်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ဆိုရင် အသံတိုးတိုးနဲ့ပြောတယ်။ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားလေးနဲ့ကျတော့ အသံတိတ်နေတတ်တယ်။..........George Eliot(၅) ယောက်ျားလေးတွေအတွက် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မူနဲ့ လောင်းကစားလုပ်တာပဲ။ မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့လောင်းကစားလုပ်တာပဲ။..W. Somerset Maughamအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာW. Somerset Maugham နဲ့ အချို့စာရေးဆရာရဲ့ စာအချို့ကို ဒီထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။(၆) အချစ်ဆိုတာ မီးတအိမ်နဲ့ တူတယ်။ အတွင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ ဆီနဲ့ ထွန်းညှိမှသာ မီးရဲ့ အလင်းရောင်ဟာ မမှိန်နိုင်ဘူး။ မညိမ်းနိုင်ဘူး။Henry H. Hansa(၇) ယောက်ျားလေးတွေ စီးကရက်တလိပ် သောက်ပြီး စိတ်ဖြေတာဟာ မိန်းကလေးတွေ တခါလောက် အားရပါးရ ငိုလိုက်တာနဲ့ ညီမျှတယ်။Edwards.Mbowe Reighton(၈) မိန်းကလေးတွေရဲ့ နုပျိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ အဲဒါကတော့ အသက်လိမ်ခြင်းပဲ။......Shakes peare(၉) အချစ်ကို မျက်စိနဲ့ မခံစားဘူး။ အချစ်ကို နှလုံးသားနဲ့ ခံစားတာ။....Shannon Fafe(၁၀) မိန်းကလေးတိုင်း ရွေးချယ်မူတခုကို ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ ယောက်ျားလေးကိုလက်ထပ်ရင် စိတ်မချဘူး။ လူချစ်လူခင်နည်းတဲ့ယောက်ျားလေး ကျပြန်တော့ စိတ်မပါဘူး။....................Mark Twain(၁၁) အချစ်ဆိုတာ ချောက်ကမ်းပါးဘေးမှာ ပေါက်နေတဲ့ ပန်းတပွင့်နဲ့တူတယ်။ အဲဒီပန်းကို ခူးဖို့ရာ သတ္တိတွေရှိရမယ်။..........Shakes peare(၁၂) အချစ်ဟာ ဘ၀ကို လောင်မြိုက်စေတယ်။ အချစ်ဟာ ရှင်သန်ခြင်းကို စိုပြေစေတယ်။....Johann W. Goethe(၁၃) လူတွေရဲ့ အချစ်ကို မခံရတာ ကြီးမားတဲ့ ဝေဒနာဆိုးတရပ် ခံရတာနဲ့တူတယ်။ လူတွေကို မချစ်နိုင်တဲ့သူဟာ ရှင်လျှက်နဲ့ သေနေတာနဲ့ တူတယ်။Gelinbeier(၁၄) အချစ်ကို နားမလည်ခင်မှာ မိန်းကလေးဟာ မိန်းကလေး မဟုတ်သလို ယောက်ျားလေးဟာလဲ ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူး။.........Histo ry Myers(၁၅) ချစ်ခြင်း မေတ္တာဆိုတာ လူ့ဘ၀မှာ ပျံ့နှံ့နေတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိရင် ဘာသာ၊ သမိုင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်မူနဲ့ အနုပညာဆိုတာလဲ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။Honore de Balzac(၁၆) ငွေကြေးကြောင့် လက်ထပ်တဲ့လူလောက် ယုတ်မာတာ မရှိဘူး။ အချစ်တခုတည်းအတွက်နဲ့ လက်ထပ်တဲ့လူလောက် မိုက်မဲတာ မရှိဘူး။Johnson(၁၇) သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာ တူညီတဲ့ခံစားမူတွေ ရှိရမယ်။ တယောက်လွတ်လပ်မူကို တယောက်က ၀င်မစွက်ဖက်ရဘူး။ပေါင်းဖက်ရခြင်းကို တန်ဖိုးထားရမယ်။ ချစ်ခင်မူကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။ ဒီအချက်တွေ ကို လက်ကိုင်ထားရင် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးအတွက် အလှဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။Bertrand Russell(၁၈) အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးသလို အချစ်ကို ဆုံးရှုံးဖူးတာက တခါမှ မချစ်ဖူးတာ ထက်စာရင် ကောင်းသေးတယ်။ ...Alfred Tennyson(၁၉) အိမ်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အဆိုးအပြစ်နဲ့ ကျဆုံးခြင်းတွေ သိုဝှက်ထားတဲ့ တခုတည်းသော နေရာဖြစ်သလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ချိုမြိန်မူတွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ Bernard Shaw(၂၀) လူ....လူ...လူ...လူဆိုတာ ရယ်မောခြင်းနဲ့ မျက်ရည်ကြားက ချိန်သီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်။ Lord Byronအချစ်.....အချစ်.....အချစ် ရဲ့ ရင်ခုန်သံဟာ အကောင်းဆုံး အိပ်ရာဝင်တေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။နိုင်းနိုင်းစနေမစ်သွန်းသွန်းကတော့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ဘာမီတွန်တဲ့။ကျမသိတဲ့ အချစ်ဆိုတာက တော့ ရေပွက်ပမာဘယ်တစ်ယောက်မှ ကြာကြာချစ်ကြည့်လို့ရဘူးလေနော်(အဲ..ဆက်ပြောရင် ပေါ်ကုန်တော့မယ် ပြေးမှ ပြေးမှ ) :Pစာကြွင်း။ ။ဒီပို့စ်တင်ပြီးမှ ထောက်ပြတာတွေ ဖတ်ပြီးမှ အပေါ်က အချက်(၂၀)လုံးနဲ့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်က နိုင်းနိုင်းမှန်းသိရလို့ credits goes to this post လို့ဖြည့်စွက်ပြောခွင့်ပြုပါကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
မိုက်သဗျာ(မလိမ္မာဘူး)... မမီရဲ့ အချစ်ဆိုတာက လုံးဝမော်ဒန်ပဲ.. =)
2007/02/21 = 21 February 2007
ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေ ကဗျာလေးတွေဆို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Forword Email နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်။ အဲလို လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ စာတွေ အများစုမှာ ဘယ်သူ့ စီကဆိုတာ မပါတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Forword Email က တာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ကိုယ်ပိုင် Blog ပေါ်တင်မယ် ဆိုရင်တော့ ရေးတဲ့သူ မူရင်းရေးသူ၊ ဘာသာပြန်သူ နာမည်မသိတောင်၊ လိုက်မရှာနိုင်တောင်မှ EMAIL က တစ်ဆင့်ရခဲ့ပါတယ် ဆိုတာလေး ကိုယ့်ရဲ့ ပိုစ့်အောင်ဆုံးမှာ ဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး ထည့်ရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဆို သူကိုယ်တိုင်ရေးတာ မဟုတ်ဘူး.. တခြားတစ်ယောက်ရေးတာကို သူကြိုက်လို့ပြန်မျှတယ်ဆိုတာလေး စာဖတ်တဲ့သူတွေ သိလိုက်ရတာပေါ့။ အပန်းကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမှ မဟုတ်တာ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ Blog လာဖတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း လေးစားရာ ရောက်ပါတယ်။ Blog ရေးသူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။
Exploring love? or announcing something? I think the latter is right :)
ဟုတ်ကဲ့ ရေးတဲ့ရက်စွဲကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်နိုင်းနိုင်း အရင်ရေးခဲ့တာပဲလေဒါပေသိ အဲဒီရေးတုန်းက ကျမမဖတ်ခဲ့မိဘူးဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာဆိုရင် ကျမ အမြဲ credits go to ဆိုပြီး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါက မေးလ်ကလဲရတာမဟုတ်တော့ နာမည်လဲမတွေ့မိလိုက်ပါဘူးဒီလိုအဆိုအမိန့်တွေက ကျမတို့လို အင်တာနက်ကြွက်တွေအတွက် စာတစ်ခုချင်းလိုက်စုနေမိတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တွေ့မိတဲ့ နေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ကိုယ်တွေးမိတာလေး ပြန်ရှဲရုံသက်သက်ပါပဲ။ အဲဒီအတွက်လို့ ကျမတို့ ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ ဘလော့ဂါအချင်းချင်းကြားထဲမှာ ဘာမှ ခံရခက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေမပေါ်ဖူးပါဘူး။ (ကိုယ်တိုင်ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလို့ ဘာသာပြန်လိုမျိုးကလွဲရင်ပေါ့လေ) ဒါနဲ့ စကားမစပ် စာဖတ်သူတွေက အဲလို သူခိုးလက်က သူဝှက်လုတွေထိ ပြောရလောက်အောင် ဘာတွေဘယ်လောက်ထိ နစ်နာထိခိုက်စေတယ်လို့ စဉ်းစားမိလို့လဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားပါ၏။ အမှန်မှာက ကောင်းတဲ့စာပေလေးတွေ ကိုယ့်နား အသိုင်းအ၀ိုင်းလက်လှမ်းမီသလောက် ဖတ်ဖူးဖို့ ဖတ်မိဖို့ ရည်ရွယ်ချက်လေးကို နဲနဲလောက်ခံစားပြီး အမြင်ကျယ်ကျယ် နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင် အပန်းပြေနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း ဒီစာလေး ရေးဖို့ တွန်းအားပေးတာတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
@Blog Readerဒီဘလော့ဂ်မှာ ရေးနေတဲ့ အစ်မ ကျွန်တော့် ဆိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေအကြောင်း ပြန် share ရင် ကျွန်တော့် ဆိုဒ်ကနေ တဆင့်ရလာတာပါလို့ ညွှန်းလေ့ရှိတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။ ပို့စ်နောက်ဆုံးမှာ Credits go to ဆိုပြီး သူပေးလေ့ရှိတယ်။ အမှန်က အဲဒါတောင်မလိုပါဘူး။ ဆိုဒ်ကို သိပြီး သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ပြန်ပြီး review ရေးတာပဲ။ အခုဟာက Writer ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ခုလုံး ပို့စ်တစ်ခုလုံးကို ကူးတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီပို့စ်က Quote လုပ်တဲ့ သဘောပဲ။ ဒါကို credit မပေးလို့ အပြစ်ကြီး တစ်ခုလို့တော့ ယူဆတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။Best Regards,Myo Kyaw Htunwww.myokyawhtun.com
MKT>> Thanksalot, broHope my lovely blog readers can also understand it like your careful point.Whatever, I will proceed my blogging as usual as much as I can do it so as to be enjoy and get something from here by visiting my blog.
I think these are quotations by authors and 99Sanay would be justatranslator or interpretor for the English illiterates. Nothing went wrong.Moreover, if you check with plagiarism, the followings are widely accepted rules across the world. sorry you may already know if you attend world standard Uni and you do essays, dissertations and thesis.To avoid plagiarism, you must give credit whenever you use * another person’s idea, opinion, or theory; * any facts, statistics, graphs, drawings—any pieces of information—that are not common knowledge; * quotations of another person’s actual spoken or written words; or * paraphrase of another person’s spoken or written words.In this case, it is justatranslated piece of words. Of course, ethically, we should put "credit". But melodymaung already explained above, which is quite reasonable and acceptable.I know what melodymaung normally did before regarding "source of materials". No point to patronise her, I believe.Be positive instead of posting useless moans and groans.